ब्लाइन्ड डेनी एक डच् कोच हो, र विगतमा फुटबल खेलाडी। अब उनी 55 वर्षका छन्, र उनी डच राष्ट्रिय टोलीमा प्रशिक्षित गर्छन्। ती दिनहरूमा उनी अझै पनि एक खेलाडी थिए, ब्लाइन्ड डैनीले लोभको रूपमा काम गरे, तर उनी पनि एक डिफेंडर र मिडफिल्डरको रूपमा दाहिने झलक खेल्न सक्थे।
क्यारियरको शुरुआत र "स्पार्टा" मा खेल्दै
ब्लाइन्ड डेनी 191961 मा होल्यान्डमा जन्मिएको थियो, जहाँ उनले प्रारम्भिक उमेरबाट रोटरडैमको "स्पाटार्टा" अकादमीमा फुटबल खेल्न थाले। यो यस क्लब संग थियो कि डेनी 1971 मा एक पेशेवर अनुबंध मा हस्ताक्षर गरे जब 18 वर्ष भयो। पहिलो पटक उनी क्लबमा विशेष रूपमा अधिक अनुभवी खेलाडिहरूको लागि एक विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्थे, त्यसैले तीन ऋतुले मात्र 37 म्याच खेले। यद्यपि, 1982 देखि ब्लाइन्ड डेनी क्लबको आधारको एक खेलाडी बनेका थिए, र धीरे-धीरे फुटबल टोलीको लागि एक प्रमुख खेलाडीमा परिणत भयो। कुलमा, "स्पार्टा" लिब्रोले सात वर्ष बिताए - उहाँ 18 गोल गर्दै स्कोर गर्दै 165 पटक जानुभयो। डचम्यान क्लबका लागि म्याचको संख्यामा शीर्ष दस रेकर्ड धारकहरू थिए, तर 1986 मा उनी "पदोन्नतिमा जानुभयो", "अज्याक्स" को बलियो क्लबमा जान।
अज्याक्सको लागि बजाउँदै
डैनी ब्लाइन्ड एक फुटबलर हो जुन निकै उत्कृष्ट प्रतिभा थियो, त्यसैले उनी क्लबको मध्य-कक्षाको सबै क्यारियरमा रहन सक्दैनन्। यही कारणले गर्दा 1986 मा एक 25 वर्षीय खेलाडीले ट्राफिकलाई राजधानीमा लिएका थिए। यहाँ उनले तुरुन्तै आधारमा भेट्टाए र चाँडै एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हासिल गरे। यो अज्याक्ससँग थियो कि ब्लाइन्डले आफ्नो क्यामेरालाई जोड्यो - यहाँ उनी पाँच पटक डच च्याम्पियन बनेका थिए, डेच कपले चार पटक जिते, 1 99 1 मा यूईएफ कप जित्यो र 1 995मा सफलताको शिखरमा पुग्यो - च्याम्पियन लीगले जित्यो। यसको कारण तथ्य ब्लाइन्डले स्वास्थ्य र सहनशीलताको प्रभावकारी आपूर्ति गरेको तथ्य थियो। अधिकांश खेलाडीहरु 33 वर्ष को क्षेत्र मा आफ्नो कैरियर खत्म हो, र डैनी 25 मा अज्याक्स मा गए - र 13 सीजनहरु को राजधानी क्लब को लागि खर्च गरे। फलस्वरूप, उनले 1 999 मा आफ्नो क्यारियर पूरा गरे। स्वाभाविक रूपले, यस्तो लामो क्यारियरको साथ "अज्याक्स" को लागि आजको रेकर्डको आधारभूत आधार वास्तवमा डैनी ब्लाइन्ड बनेको छ। डच क्लबमा खेलाडीको तथ्याङ्क अचम्म छ - 482 म्याच र 36 गोल।
होल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीमा, ब्लाइन्ड क्लब स्तरमा राम्रो थिएन। उनले 1986 मा मात्र उनको पहिलो बनाइदिए, जब उनले "अज्याक्स" लाई सार्नुपर्यो - यसले उनीहरूलाई देख्न सकेन किनभने उनले सबैभन्दा उत्कृष्ट क्लबको लागि खेल्न सकेनन्। अन्तमा, ब्लाइन्डले डच राष्ट्रिय टोलीको शर्टमा मात्र 42 म्याच खर्च गरे, एक गोल गर्दै। डचम्यानले 1 996को युरोपेली च्याम्पियनशिपमा एकमात्र ठूलो टूर्नामेंट चलाए, जहाँ उनले आधारमा चारवटा म्याच खेले।
अन्धाले आफ्नो खेल क्यारियर पूरा गरेपछि, तुरुन्तै कोचको रूपमा काम गर्न थाले। उनले युवा टोली "एएक्सएक्स" को कोचको रूपमा सुरू गरे - ब्लिन्डले6वर्षको लागि काम गरे, पछि उनलाई एम्स्टर्डम क्लबको टाउको कोच नियुक्त गरियो। तथापि, उनको सफलता 2006 को गर्मी को समयमा सबै भन्दा प्रभावशाली थियो, त्यसैले त्यो निकाल दिए। एक वर्ष पछि, उनी आफ्नो मूल रोटरडैम "स्पार्टा" मा गए, जहां उनले खेलकुद निर्देशक बने, र एक वर्ष पछि यस स्थिति मा "अजक्स" को लागि आमंत्रित गरियो। त्यहाँ उनले अर्को वर्ष काम गरे, जसको पछि उहाँ एक सहायक प्रशिक्षक बन्नुभयो - दुई वर्षसम्म उहाँले मार्टिन जोल र फ्रैंक डे बोएरको निर्देशनमा काम गर्नुभयो, र 2001 मा फेरि खेलकुद निर्देशक बने। 2012 को गर्मीमा, सबै कुरा परिवर्तन भयो, ब्लाइन्ड डच राष्ट्रिय टोलीको कोचिंग स्टाफमा समावेश गरिएको थियो। त्यहाँ उनी तीन वर्षको लागि सहायक प्रशिक्षक लुइस वान गला र गिउज हिडिन्क थिए। र 2015 को गर्मी मा उनले आफैले टीम को कोच नियुक्त गरे - यस स्थिति मा उनि अझै पनि काम गर्दै छन्। एक प्रशिक्षकको रूपमा, ब्लाइन्डले लगभग कुनै ट्राफिक जित्न सकेन। उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि 2006 मा "अज्याक्स" संग डच कप मा विजयी थियो। तथापि, डैनी धेरै वर्ष कोचिंग को लागी धेरै वर्ष कोचिंग को लागी नहीं हो। यो सम्भव छैन कि अब उनी कुनै व्यक्तिको सहायक हुनेछ, यद्यपि टीम पहिलो सबैभन्दा बढी रूसी थिएन - डच 2016 मा युरोपियन च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुग्न सकेन।
Timberk (पानी तताउने): पुस्तिका, समीक्षा, फोटो
स्मार्ट कार्ड - कुनै पनि व्यापार मा सबै भन्दा राम्रो सहायक
Velikiy Ioann पावलले 2: जीवनी, जीवन, इतिहास र भविष्यवाणी
Ontogeny के छ र मानव समाज को लागि आफ्नो सुविधाहरू के हुन्?
शैक्षिक कार्यक्रम: जहाँ स्क्रिनशट सुरक्षित छन्?
GIFCA के हो? GIF-छवि "VKontakte" र मात्र
सलाद "Obzhorka" बीफ: फोटो संग नुस्खा
को gallbladder र bile वाहिनी